Idi Amin oo geeriyooday | BBC Somali
Sabti, 16.08.2003 - 08:26 Wakhtiga London
Idi Amin oo geeriyooday Idi Amin oo ku geeriyooday dalka Sucuudi Arabia.
Madaxweynihii hore ee Uganda, Idi Amin ayaa ku dhintey waddanka Sucuudiga isagoo jira da' lagu qiyaasey 80 sanadood.
Idi Aman waxa uu ahaa nin xoog weyn oo lahaa himalooyin waaweyn, waxa kale uu ahaa nin fikaradon waaweyn ka qaba naftiisa. Idi AmiinIdi Amin waxa uu dhashey sanadkii 1925kii, waxbarasho rasmi ah oo badan ma uusan lahayn, laakiin isagoo aad u da'yar ayuu ku biirey Miletrigii Musacmarkii Ingiriiska.
Waxa bilowgii taariikhdiisa uu madaxdiisa ku soo jiitey ooy ku jeclaadeen markii uu noqdey ninka heysta fiirka culus ee Uganda sanadkii 1951kii, sidaasna uu kor ugu dalacey jaranjaradii Milateriga.
Markii ay Uganda qaadatey gobonimadeeda sanadkii 1962kii, waxa uu Idi Amin aad ugu dhawaadey oo uu garab istaagey madaxweynihii waddanka ee wakhtigaas Milton Obote, waxana Amin loogu abaal gudey in loo dhiibo ciidamada lugta iyo kuwa cirkaba.
Laakiin sandkii 1971kii ayuu Idi Amin ka soo horjeestey Obote oo uu ahfangabi xukunkii kaga maroorsadey, isdagoo wada gowracey askartii uu u arkey in uusan aamini karin.
Muddo yar markii uu xukunka heystey ayuu Idi Amin waddanka Uganda ka eryey tobannaan kun oo eeshiyaan ah isagoo dhulkoodii, hantidoodii iyo ganacsigoodiiba siiyey saaxiibaddiis.
Iyadoo waddanka Uganda uu hoos ugu sii quusayo jahwareer iyo musuqmaasuq ayuu Idi Amin uu isagu isa siiyey darajooyin magac oo cusub, waxana darajooyinkaas ka mid ah in uu isku magacaabey Madaxweyne waligii jooga oo aan dhicin, jabiyihiii jabshey Boqortooyadii Ingiriiska iyo qaar kale isagoo xabadkiisa ku safey bilado aan tiro lahayn.
Tallaabooyinkaasi waxa ay keeneen in dad badan oo daafaha adduun ku kala nool ay ku maadsadaan ficilada Idi Amin.
Markii la gaarey sanadkii 1978dii, Idi Amin waxa uu arkey in saaxiibadii iyo taageerayaashii uu lahaa ay ka tageen, si uu haddaba indhaha uga leexsho mashaakilka gudaha Uganada ka taagan, madaxweyne Amin waxa uu weerar ku qaadey waddanka ay dareska yihiin ee Tanzania. Ka dibna waxa weerarkiisii u jawaabey ciidamada Tanzania oo ay taageerayaan jabhado reer Uganda ah oo xukunkiisa ka soo horjeedey, taasoo Amin lagu jabshey kuna qasabtey in uu dalka uu iskaga cararo. Idi Amin waxa uu dhintey Isagoo aan marna dib u arkin waddankiisii oo masaafiris ku maqan. Waxana uu addunka ka jiitey isagoo aan la jeclayn laakiin aan la ilaabi karin.